DAAWO: Boqorka Qadar oo casuumaad Usoo diray Madaxweynaha Soomaaliya - Hablaha Media Network
DAAWO: Boqorka Qadar oo casuumaad Usoo diray Madaxweynaha Soomaaliya
HMN:- Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu booqdo magaalada Doxa ee dalka Qadar, kaddib markii uu casuumaad uu ka helay Boqorka dalkaas Sheekh Tamiim Bin Xamid al-Thani.
Kulan Madaxweynaha iyo Boqorka Qadar ku yeesheen magaalada Riyadh ayay uga wada hadleen xiriirka labada dal.
Agaasimaha Madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa sheegay in Boqorka Qadar iyo Madaxweyne Farmaajo ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa cilaaqaadka labada dal.
Waxaa uu sheegay in Amiirka Qadar uu ku adkeeyay Madaxweyne Farmaajo, casuumaadii uu u soo diray Madaxweynaha “Sida la socotaan Qadar waxay ka mid aheyd dalkii u horeeyay ee casuumaad u soo diray Madaxweynaha, balse nasiib uma aanu helin inuu tago, hadana Boqorka Qadar tii unbuu ku adkeeyay Madaxweynuhu” ayuu yiri Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada.
Safarada Madaxweyne Farmaajo ee dibadda ayay si gaar ah isha uga wada hayaan dadka Soomaaliyeed, maadaama markii Madaxweyne Farmaajo ku jiray ololihiisa doorashada uu balan qaaday inuu safarada yareyn doono, isagoo ku dhaliilay madaxdii hore safarada badan.